Isidlo sakusasa: Fumana iimpembelelo, Yakha iiPhulo, kunye neMilinganiselo yeZiphumo | Martech Zone
Isidlo sakusasa: Fumana iimpembelelo, Yakha iiPhulo, kunye neMilinganiselo yeZiphumo
NgoLwesine, uJanuwari 7, 2021 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Ifemi yam isebenza nomvelisi ngoku ojonge ukwenza uphawu, ukwakha indawo yabo ye-ecommerce, kunye nokuthengisa iimveliso zabo kubathengi ngonikezelo lwasekhaya. Itekhnoloji ebesiyihambisile kwixesha elidlulileyo kwaye eyona nto iphambili ekwandiseni ukufikelela kwabo yayikukuchonga abachaphazeli abancinci, abachaphazeli ekujoliswe kubo, kunye nabaphembeleli beshishini ukunceda ukwakha ulwazi nokuqhuba ukufunyanwa.
Intengiso yempembelelo iyaqhubeka nokukhula, kodwa iziphumo zihlala zilungelelaniswe ngokuthe ngqo nendlela ophembelela ngayo onxulumene ngqo nemarike ekujolise kuyo ozama ukufikelela kuyo. Iimpembelelo ezibanzi, njengosaziwayo, zinokuxabisa ngenqanaba lokujonga okuphezulu, kodwa zihlala zinenqanaba lokuphendula elincinci. Nangona kunjalo iphantsi inqanaba lokuvela nge-micro-influencer, bahlala befumana amanqanaba aphezulu okuphendula nangona bengenanto iphantse ilandelayo.
Iimpawu ezinomdla wokuhambisa intengiso yempembelelo zihlala zisokola ekuchongeni abachaphazelayo. Uphando olufunekayo luyanzima kwaye alulula njengokujonga nje ukubala okuphezulu komlandeli. Kukuqonda i-niche enegunya kuyo, ukuzithemba abanako nabalandeli babo, kunye nokunxibelelana kwabo kwezithuba abanazo nabaphulaphuli babo.
Nalu uhlengahlengiso olukhulu lwendlela yokufumanisa ukuba yeyiphi impembelelo yokusebenza kunye nabo I-Mediakix.
Iqonga lokuthengisa elinempembelelo kuRhulumente
Iimpawu zinezixhobo ngoku zokubanceda bafumane abachaphazeli, baphuhlise amaphulo okusebenzisana nabo, basete ulindelo, kwaye balinganise iziphumo. Ayisiyiyo kuphela into abanokuthi bayenze ekukhangeleni abachaphazeli kwaye babamemele kumaphulo, banokupapasha iphetshana elifutshane elinokuthi abaphembeleli baphendule kulo. Ukutya esidlangalaleni liqonga lokuthengisa elinempembelelo elinokwenza abathengisi ukuba:
Fumana abachaphazeli -Misa umsebenzi wokuqikelela kwaye wenze ukuthengisa kwakho njengempembelelo kunokuqikelelwa njengokuqhuba iintengiso kuFacebook. Jonga iindleko ngonqakrazo ngalunye, i-CPM, inani lokuvela kunye nezinye iindlela zokulinganisa ezinokuphucula isicwangciso sakho kunye nokuzisa eyona ROI intle.
Yakha imikhankaso enokuqikelelwa - Amanqaku angabhala ngokufutshane, kubandakanya ulwazi ngemveliso, ukubekwa kwabo bafuna, kunye neenjongo zomkhankaso. Ukutya esidlangalaleni emva koko isebenzisa ii-algorithms zayo ukuqikelela iziphumo ngokusekwe kwiinjongo. Abaphembeleli banokungenisa umxholo, bafumane umkhondo wokukhangela, kwaye omabini amaqela angavuma amaphulo kwaye avumelane ngembuyekezo.
Bhatala iphulo okanye intsebenzo - Ukutya esidlangalaleni ibonelela ngempembelelo yakho ngamakhonkco akho obuntu okulandela umkhankaso wezenzo zakho zomkhankaso ukuze uphawu lubeke esweni ukusebenza kwakho okanye lukuhlawule ngokusekwe kwisenzo.
Ukutya esidlangalaleni kunceda amakhulu amawaka abachaphazeli ukuba bafumaneke kwaye basebenzisane ngaphezulu kwe-1000 + zeempawu ngaphaya kwamakhulu amaphulo okuthengisa anefuthe kwilizwe liphela.
Zama esidlangalaleni simahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Ukutya esidlangalaleni kunye ne-Influencer edwelisiweyo.
tags: fumana abachaphazeliindlela yokufumana abachaphazeliindlela yokukhetha abachaphazeliukuthengisa okunempembeleloiqonga lokuthengisa elinempembeleloukuqikelela imikhankaso yokuqhubela phambiliindawo yoluntu
I-Sonix: Ukukhutshelwa okuzenzekelayo, ukuGuqulela kunye nokuHambisa kwiilwimi ezingama-40 +
Deal: Yongeza i-Express Checkout Experience Ukunyusa amaxabiso okuGuqulwa kunye nokuKhuthaza ukuThengisa